Meeting ဦးဆောင် သူတိုင်း သိထားသင့် တဲ့ အချက်များ – Live the Dream
Meeting ဦးဆောင် သူတိုင်း သိထားသင့် တဲ့ အချက်များ
ရုံးမှာ Meeting လုပ်မယ်ဟေ့ လို့ ဆိုလိုက်ရင် ဘယ်သူများ တက်တက်ကြွကြွ ရှိလဲ? နိုင်ငံတကာက စစ်တမ်းတွေအရ Meeting တွေဟာ အစီအစဉ် တကျမရှိဘဲ လုပ်ငန်းခွင်မှာ အချိန် ကုန်ပြီး အကျိုးမရှိဘူးလို့ ဝန်ထမ်းတော်တော်များများက လက်ခံ ထားကြပါတယ်။ အစည်းအဝေး တစ်ခု ကို ဦးဆောင်ရတယ်ဆိုတာလည်း ပြောရသလောက်တော့ မလွယ်လှပါဘူး။
အစည်းအဝေး အတွင်းက အခြေအနေပေါ် မူတည်ပြီး ပြင်ဆင်ရတာတွေ မီးစင်ကြည့်က ရတာတွေ နဲ့ ဆိုတော့ လိမ္မာပါးနပ် မှု ကလည်း လိုအပ်ပါသေးတယ်။ မင်မင် အနေနဲ့ လည်း မနည်းလှတဲ့ အစည်းအဝေး အရေအတွက်ကို တက်ရောက်ခဲ့ဖူး တဲ့ အလျောက် တွေ့ ကြုံ ခဲ့ ရတဲ့ အခြေအနေတွေပေါ် မူတည်ပြီး Meeting ဦးဆောင်တဲ့ အခါ အထောက်အကူ ဖြစ်စေမဲ့ နည်းလမ်းလေး အချို့ ကို ဝေမျှပေးလိုက်တာမို့ နောက်တစ်ခါ အစည်းအဝေး ဦးဆောင်ကြမဲ့ သူတွေအတွက် တစ်စုံ တစ်ရာ အကျိုး ရှိမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
၁. Agenda သေချာ ပြင်ဆင်ပါ
Meeting တစ်ခုရဲ့ အသက် က agenda ပါပဲ။ Agenda သေချာ စီစဉ် ထားမှု မရှိတဲ့ အစည်းအဝေး တစ်ခုဟာ ဘယ်လောက်တောင် ကမောက်ကမ နိုင်မလဲ ဆိုတာ တွေးကြည့်လို့ ရပါတယ်။ Agenda ကိုလည်း အနားနီးမှ ကပ်ဆွဲတာထက် အစည်းအဝေး လုပ်မယ်လို့ ချိန်းလိုက်ပြီးကတည်းက ဆွေးနွေး ကျမဲ့ အကြောင်းအရာ အချိန်ဘယ်လောက်ပေးမလဲ ဘယ်သူတွေနဲ့ ဆွေးနွေးမလဲ စသဖြင့် တိကျ တဲ့ Agenda လေးရှိနေမှ အစည်းအဝေး တစ်ခု က အဆင်ပြေနိုင်မှာပါ။ Agenda ပြင်ဆင်ထားပြီးရင်လည်း အစည်းအဝေးကို ဦးဆောင်တဲ့ သူက ကိုယ် စီစဉ်ထားတဲ့ Agenda အတိုင်း အတိအကျ လိုက်နာဖို့ လည်း လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီလို မှမဟုတ်ရင် အချိန်တွေသာ ကုန်ပြီး အကျိုးမရှိတဲ့ တွေ့ ဆုံမှု ကြီး တစ်ခု ဖြစ်သွားမှာပါ။ ဒါကြောင့် Meeting ရဲ့ အသက်က Agenda ပါနော်။
Agenda မှာ သတ်မှတ်ထားတဲ့ အစည်းအဝေး စတင်ချိန် အတိုင်း အတိအကျ စတင်ပါ။ တစ်ခါတစ်လေ အစည်းအဝေး လာတဲ့ သူတွေ နောက်ကျလို့ စောင့်နေရင်း အစည်းအဝေးစတင်ချိန်လည်း နောက်ကျ သွားကြတာ မျိုးတွေလည်း ဖြစ်နေကြများပါတယ်။ အစည်းအဝေး စတာ နောက်ကျရင် ပြီးတာနောက်ကျ၊ နောက် ဆက်လုပ်ရမဲ့ အလုပ်တွေ မပြီး ဒီလို အကျိုးဆက်တွေ ရှိလာနိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် အစည်းအဝေး တက်ရမဲ့ သူတွေကလည်း နောက်မကျ ဖို့တော့ ကြိုးစားရပါလိမ့်မယ်။ အလုပ်ခွင်ထဲမှာတော့ အဖြစ်နည်းပေမဲ့ တချို့ လူမှုရေး အဖွဲ့ အစည်းတွေ အသင်းအဖွဲ့ အစည်းတွေမှာ အစည်းအဝေးလုပ်ဖို့ သပ်သပ် ချိန်းကြရတာမျိုုးတွေ ရှိပါတယ်။ အစည်းအဝေး ဦးဆောင်တဲ့ သူတွေက ကိုယ့်လူတွေ နောက်ကျတတ်တာ သိရင် အစည်းအဝေး စမဲ့ အချိန်ထက် အနည်းဆုံး နာရီဝက်လောက် ကြိုချိန်းပါ။ အရမ်း နောက်ကျတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့ ၁နာရီလောက် ကြိုချိန်းပေးလိုက်ပေါ့။
၃. လိုအပ်သူသာ ခေါ်ပါ
ဆွေးနွေးကြမဲ့ အကြောင်းအရာနဲ့ သက်ဆိုင်မှု မရှိသူတွေကိုလည်း အကြောင်းအရာ သိရအောင်ဆိုပြီး ဝင်နားထောင်ခိုင်းလိုက်ရင် အလုပ် Deadline မပြီးတာတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ တွေ့ဆုံ ပွဲတွေ အစည်းအဝေးတွေကို ကျစ်လစ် ပြီး အမှန်တကယ် အလုပ်ဖြစ်စေချင်ရင်တော့ အစည်းအဝေးမှာ ဆွေးနွေးကြမဲ့ အကြောင်းအရာ နဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ သူ၊ တာဝန်ယူ တဲ့ သူ မဖြစ်မနေ သိဖို့ လိုအပ် တဲ့ သူတွေနဲ့ သာ အစည်းအဝေး လုပ်တာ ဟာ အထိရောက်ဆုံး နည်းလမ်းပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ ပွင့်လင်း မြင်သာမှု ရှိအောင်တော့ Meeting Notes အဖြစ် Meeting မှာဆွေးနွေးခဲ့ ကြတာတွေကို လူတိုင်းသိအောင် ပြန်လည် ကြေညာပေးတာမျိုး ပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။
၄. Target မလွဲပါနဲ့
အစည်းအဝေး တွေမှာ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထ ရှိတတ်တာ တစ်ခု က ခေါင်းစဉ် ပျောက်သွားတတ်တာပါပဲ။ ဆွေးနွေးကြမဲ့ အဓိက အကြောင်းအရာတွေ မပြောခင် ဒါမှမဟုတ် ဆွေးနွေးနေကြရင်း နဲ့ ပဲ စကားတွေ က ဟိုရောက် ဒီရောက် ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ အဓိကဆွေးနွေးနေကြတာ ဘာ အကြောင်းအရာ မှန်းတောင် မသိတော့တဲ့ အထိ ခေါင်းစဉ် ချော် သွားတာတွေ ဖြစ်သွားတဲ့ အခါ လိုရင်း ကိုမရောက်တော့ဘဲ အချိန်တွေလည်း ကုန်ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် အစည်းအဝေး ဦးဆောင်ပေးတဲ့ သူက အကြောင်းအရာချော် မသွားဖို့ ချော်သွားရင်လည်း အဓိက ဆွေးနွေးနေတဲ့ အကြောင်းအရာအပေါ် ပြန်လည် ဆွဲခေါ်ပေးဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
၅. Professional ဆန်ပါ
အစည်းအဝေး ထိုင်တဲ့ အခါ Professional ဆန်စွာ ပြောဆိုဆက်ဆံ တတ်ဖို့ ကလည်း အရေးပါလှပါတယ်။ အစည်းအဝေးမှာ ပါဝင်တဲ့ သူတိုင်းက အကြောင်းအရာ တစ်ခုကို အခြေခံ ပြီး ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးကြတာ ဖြစ်လို့ အမြင်မတူ တာတွေလည်း ရှိမှာ အသေအချာပါ။ ကိုယ့်ရဲ့ ထင်မြင်ချက်တွေ အကြံဉာဏ်တွေကို တင်ပြဆွေးနွေးကြတဲ့ အခါ ငြင်းရ ခုံရ တာတွေလည်း ရှိနိုင်တယ်။ အထူးသဖြင့် Culture မတူတဲ့ Multinational company တွေမှာဆိုလည်း အတွေးအမြင်တွေ ကွဲပြားတာကြောင့် နားလည်မှု လွဲပြီး အစည်းအဝေး ခန်းထဲမှာပဲ ကျွန်တော်တို့ စိတ်အနှောင့်အယှက် ဖြစ်ရတာတွေလည်း ကြုံဖူးကြမှာပါ။ အဆိုးဆုံးကတော့ အပြင်က ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ စိတ်ခံစားချက်တွေကို Meeting ခန်းထဲ သယ်လာတတ်တဲ့ သူတွေပါပဲ။ ဒါကြောင့် ငြင်းစရာ ရှိနေရင်လည်း pro ဆန်ဆန်ငြင်းတတ်ဖို့ meeting room ထဲမှာ ရုတ်တရက် ဖြစ်လာတဲ့ စိတ်ခံစားချက်တွေကို Professional ဆန်စွာ တုံ့ ပြန်နိုင်ဖို့ ကလည်း လိုအပ်လှပါတယ်။
အစည်းအဝေးမှာ လူတွေ ၄ ယောက် ၅ယောက် စုထိုင်နေကြပေမဲ့ တစ်ယောက် နှစ်ယောက် ထဲ ကပဲ ဒိုင်ခံ ပြောနေမယ်ဆိုရင် အစည်းအဝေး နဲ့ မတူတော့ဘဲ ဟောပြောပွဲတစ်ပွဲ ကို လာနားထောင်နေသလိုလို လူနှစ်ယောက် စကားအပြန်အလှန် ပြောနေတာကို ဘေးလူတွေက သပ်သပ်ကြီး လာနားထောင်နေသလိုလို ဖြစ်နေမှာပေါ့။ လူတိုင်းမှာ အတွေးကိုယ်စီ အမြင်ကိုယ်စီ တွေရှိကြပါတယ်။ တစ်ချို့ ကျတော့လည်း ကိုယ့်ထင်မြင်ချက်တွေကို ထုတ်ဖော်ပြောရဲ ကြပေမဲ တစ်ချို့ တွေကျတော့ မေးမှပဲ ပြောတော့ မယ် ဆိုတဲ့ အတွေးရှိသလို တစ်ချို့ ကျတော့လည်း ငါပြောလိုက်လည်း ဘာမှမထူးပါဘူး ဆိုပြီး တွေးလေ့ရှိကြပါတယ်။ ကိုယ်ပိုင် အမြင်အတွေးအခေါ်တွေကို ထုတ်ဖော်ပြောပြနိုင်ခြင်း ဟာ ဝန်ထမ်းတွေ အတွက်လည်း လုပ်ငန်းခွင်မှာ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှု တိုးလာစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မို့ အစည်း အဝေး ခန်းထဲက ဆွေးနွေးချက်တွေတိုင်းကို အစည်းအဝေး ခန်းထဲမှာ ရှိတဲ့ သူတိုင်း ပါဝင်ဆွေးနွေးနိုင်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
၇. အစည်းအဝေး အဆုံးသတ်
ပြောဆို ဆွေးနွေးကြတာတွေ ပြီးဆုံး သွားပြီဆိုရင်တော့ Meeting ကို အဆုံးသတ်ကြ ရတော့မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အစည်းအဝေး ကို အဆုံးသတ်တဲ့ အခါမှာ Agenda မှာ သတ်မှတ်ထားတဲ့ အချက်တွေပါဝင်ရဲ့လား အစည်းအဝေး တောက်လျှောက် ဆွေးနွေးခဲ့တာတွေဟာ အဆုံးမှာ လိုချင်တဲ့ solution ကို ရရဲ့လား ဆိုတာ ကို ပြန်လည် သုံးသပ်ဖို့ ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်တော့ Meeting တစ်ခုဟာ ပြီးသာပြီးသွားတယ်၊ နောက်ဆုံးမှာ Action Plan မရှိ Final Decision မချဘဲ ပြီးသွားရင်တော့ အကျိုးမရှိဘဲ အချိန်ကုန်တဲ့ meeting တစ်ခု ဖြစ်လာမှာပါ။ အကြောင်းကြောင်း ကြောင့် ဆုံးဖြတ်ချက် မချနိုင်ခဲ့ ရင်တောင် နောက်ထပ် ဆက်လက် လုပ်ကိုင်ဖို့ ခိုင်မာတဲ့ အစီအစဉ် တစ်ခုခု ရေးဆွဲ သွားဖို့တော့ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီလို အစည်းအဝေး အဆုံးသတ် ဟာ Meeting ဦးဆောင်သူတွေပေါ်မှာ အများကြီး မူတည်တာမို့ အစည်းအဝေး တောက်လျှောက်မှာ သေချာ လေ့လာနေဖို့ အရေးကြီးတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံး အနေနဲ့ လုပ်ငန်းခွင် သို့မဟုတ် ကိုယ်ကျင်လည်နေတဲ့ အဖွဲ့ အစည်းတွေမှာ ဦးဆောင်နေသူတွေလည်း အရင် Meeting တွေကအမှားတွေကို ပြန်လည်သုံးသပ်ရင်း အနာဂတ်မှာ ပိုမိုကောင်းမွန် တဲ့ ဦးဆောင်သူတွေ ဖြစ်လာနိုင်ကြပါစေလို့ ဆန္ဒ ပြု လိုက်ပါတယ်။